Karbo စျေး - အွန်လိုင်း KRB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Karbo (KRB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Karbo (KRB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Karbo ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $518 219.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Karbo တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Karbo များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
KarboKRB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0593KarboKRB သို့ ယူရိုEUR€0.0499KarboKRB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0451KarboKRB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.054KarboKRB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.532KarboKRB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.372KarboKRB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.31KarboKRB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.221KarboKRB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0788KarboKRB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.082KarboKRB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.33KarboKRB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.46KarboKRB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.317KarboKRB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.45KarboKRB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10KarboKRB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0812KarboKRB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0889KarboKRB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.85KarboKRB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.412KarboKRB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.26KarboKRB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩70.28KarboKRB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦22.57KarboKRB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.35KarboKRB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.64
KarboKRB သို့ BitcoinBTC0.000005 KarboKRB သို့ EthereumETH0.000149 KarboKRB သို့ LitecoinLTC0.000985 KarboKRB သို့ DigitalCashDASH0.000577 KarboKRB သို့ MoneroXMR0.00063 KarboKRB သို့ NxtNXT4.24 KarboKRB သို့ Ethereum ClassicETC0.00823 KarboKRB သို့ DogecoinDOGE16.46 KarboKRB သို့ ZCashZEC0.000594 KarboKRB သို့ BitsharesBTS2.26 KarboKRB သို့ DigiByteDGB2.16 KarboKRB သို့ RippleXRP0.192 KarboKRB သို့ BitcoinDarkBTCD0.00199 KarboKRB သို့ PeerCoinPPC0.205 KarboKRB သို့ CraigsCoinCRAIG26.31 KarboKRB သို့ BitstakeXBS2.46 KarboKRB သို့ PayCoinXPY1.01 KarboKRB သို့ ProsperCoinPRC7.24 KarboKRB သို့ YbCoinYBC0.00003 KarboKRB သို့ DarkKushDANK18.52 KarboKRB သို့ GiveCoinGIVE124.96 KarboKRB သို့ KoboCoinKOBO12.96 KarboKRB သို့ DarkTokenDT0.0546 KarboKRB သို့ CETUS CoinCETI166.62
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 18:20:01 +0000.